Finoana silamo : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Finoana silamo : Fahasamihafan'ny versiona roa
Finoana silamo (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 15 Aogositra 2019 à 16:56
12 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 14 Jiona 2019 à 12:28 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 15 Aogositra 2019 à 16:56 (hanova) (esory)
=== Ny sonisma ===
Ny [[sonisma]] no sampana lehibe indrindra ao amin'ny finoana silamo izay ahitana ny 90%n'ny mpino silamo maneran-tany. Iray amin'ny sampana telo lehiben'ny finoana silamo ny sonisma. Miavaka amin'ireo sampana hafa ireo ny sonisma noho ny fomba fiheverany ny fivavahana. Matetika dia lazaina ho "Miozolmana ortodoksa" ny Sonita.
=== Ny shiisma ===
Ny [[shiisma]] dia sampan'ny finoana silamo izay manaiky fa i Ali sy ny taranany no mpandimby an'i Mohamady. Ny Shiita dia 10% hatramin'ny 15%n'ny vakoaka miozolmana maneran-tany, ka ny ankamaroany dia monina ao [[Iràna]] sy [[Iràka]] ary ao Bareina. Shiita dia manana mpitondra fivavahana ahitana ambaratongam-pitondrana.
=== Ny karijisma ===
Ny karijhisma[[karijisma]] dia sampan'ny finoana silamo izay teraka tamin'ny fanelanelanana natao tamin'i Ali sy i Mu'awiya raha avy nidyniady tao Siffin izy ireo tamin'ny taona 657. Atao hoe Karijita ny mpino silamo ao aminy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/973041"